Wasiirka Cusub Ee Arrimaha Gudaha Oo Xilka Kula Wareegay Madal Soo Jiidatay Indhaha Ka Qayb Galeyaasha+Sawirro | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Wasiirka Cusub Ee Arrimaha Gudaha Oo Xilka Kula Wareegay Madal Soo Jiidatay Indhaha Ka Qayb Galeyaasha+Sawirro
Published on August 28, 2016 by sdwo · No Comments
Hargeysa(SDWO.com): Wasiirka cusub ee wasaarada arrimaha gudaha Somaliland Yaasiin Maxamuud Xiir (Faratoon), ayaa maanta xilkii si rasmi ah ugala wareegay wasiirkii hore Cali Maxamad Warancade.
Munaasibadan ay laba wasiir xilalka kula kala wareegayeen oo ka dhacday barxada hore ee xarunta wasaarada arrimaha, waxaa ka soo qayb galay wasiirro ah, taliyeyaasha ciidamada, qaar ka mid ah badhasaabadda goboladda dalka, guddoomiyaha xisbiga KULMIYE, oday dhaqameed, dadweyne aad u tiro badan iyo masuuliyiin kale.
Wasiirkii hore ee wasaarada arrimaha gudaha Cali Maxamad Warancade oo madashaasi hadal ka jeediyay ayaa xusay inu wareejiyo dad iyo dal nabada, isla markaana uu wasiirka cusub u rejaynay in uu hawsha halkaasi ka sii wado.
Isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxaan wareejinayaa dal ka bad-baaday qaraxyad asqeeyay wadamada geeska afrika, waxaan wareejinaya dal ka badbaaday baaruuda qadhmuun ee jahawareerisay badi geeska afrika. Waxaan wareejinaya wasaarad uqaabilsan dalka nabadgaliyada, uu dalkani ka badbaaday inay caruurteenu ku sanboortoo qiiqa taayirada la gubo, wadanka saddexdaa qaybood ka badbaaday ayaynu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa”.
Cali Warancade waxaa uu sheegay inuu wareejinayo in ka badan kob iyo toban gaadhi oo uu isagu iska leeyahay “Maalintii aan la wareegay xilka wasaarada arrimaha gudaha waxaan laygu wareejiyay laba baabuur laakiin maanta waxaan wareejinaya koob iyo toban baabuur oo aan kaligay iska lahaa, baabuurtaasi oo aanku keenay si dadban.
Waxaanan halkan uga mahad celinya ganacsatada Somaliland ee markaan idhaaho keena waxaasu qaranku u baahan yahaye deg dega u keenayay, waxaa kale oo aan wareejinaya dhawr iyo labaatan baabuur oo aanku keenay sifaaha dadban, oo ah ninku hadii u wadankiisa u shaqeynayo inuu ku kordhiyo wixii uu ku kordhin karo”ayuu yidhi Waran Cade.
Isagoo hadalkiisa sii watay-na waxa uu yidhi “Haddii aad wadan colowdaan horumarkii waa uu hadhayaa, wadamada aynu jaarka nahay waxaa naga dhaxeeya wada shaqeyn wanaagsan, sida Jabuuti. Waxaanay noo mareysaa meel aad iyo aad u qiimo badan, Itoobiya waa dal aynu jaar nahay oo aynu aad iyo aad isugu dhaw nahay oo aynu leenahay xuduud dheer.
Waxaanay wasaaradu ku guuleysatay inay ka sameyso nabad-galiyo aad u qiimo badan, adkeynayana nabad-galiyada haday tahay ta dawlad deegaaneedka iyo ta federaalkaba, waxaana cadeynaya waxyaabihii noo qabsoomay arintii ka dhacday degmada Gaashaamo”.
Cali Waran Cadde, waxa uu hoosta ka xariiqay Waran Cade, inuu ku qanacsan yahay xilka safiirnimo ee loo magacaabay “Haddii uu ii magacaabay wasaarad aan waxba ka yereyn wasaarada aan ka shaqeynayay oo ka cudur daartay, oo aan Madaxweynahana dhagta u saaray Madaxweyne waxaan doonaya inaan yara nastoo aan mustabalka Madaxweyne noqdo uu tiina iga aqbalay.
Hase ahaate qarankani wadci kasta oo uu joogo iyo meelkasta oo uu joogo, inaan diyaar u ahey inaan u shaqeeyo, intii aan noolaheyna wixii aan u qaban karo aan u qabto”ayuu yidhi wasiirkii hore ee daakhiliga.
Wasiika cusub ee xilka la wareegay Yaasiin Maxamuud Xiir (Faratoon), oo isna madashaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu nabadeynta gobolada bariga wax weyn ka qaban doono sidoo kalena u mahadnaqay wasiirka iyo shaqaala weynaha wasaarada arrimaha gudaha.
Waxaanu yidhi “Gobolada bariga nabadeyntooda waan ku dadaalaya, laakiin markaan waxooga yar xagooda u leexiyo ha odhanina malaha ninkani wixiiba xagooda ayuu u leexiyay, wasiirka iyo shaqaalaha wasaaradana aad iyo aad ayaan ugu mahad-naqayaa wada shaqeyn wanaagsan baana naga dhaxeyn doonta wanaan la tashan doonaa”.
Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye Mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna goobtaasi ka hadlay ayaa shaaca ka qaday wakhtiga rasmiga ah ee ay doorashadu dalka ka qabsoomeyso. waxaa uu yidhi “Wasiirkii hore waanu ku hanbalyaynaynaa wixii uu qabtay kan kalana waanu soo dhaweynaynaa , Insha allaahu bisha March waxaa gabi ahaanba dalka ka dhici doonta doorashadii.
Sidoo kale-na waxaa inagu soo socda shir culus oo bisha Octobar lagu qaban doono, magaalada Burco shirkaasina waxaynu u baahanahay qaran ahaan iyo shacab ahaanba inaynu u diyaar garowno. Shirkaasi oo laysku laab xaadhan doono waxyaabihii aynu isku heynay gobolada Sool iyo Sanaag lagu dhameeyo wada hadal, oo Dimuquraadiyadu yaanay dhaqankeena inaga dumine aynu arinteena wada hadal ku dhameysano, odayaasheenu dhaqankuna ha ilaaliyaan wixii qaranimadeena waxyeelaya”.
Waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay wasiirka gaashaandhiga Axmed Xaaji Cali Cadami, ayaa tillmaamay qiimaha ay wasaaradani qaranka ugu fadhido. “Xilkaa ay labada wasiir ee daakhiligu isku wareejinayaan qiimeyn gaara ayay leedahay, inteena ka soo qayb gashayna ajar ayaynu ku leenahay waxaanaynu muujinaynaa in aynu ka duwanahay kuwa layna barbar wado ee layna barbar eryaayo.
Markaa in aynu dawladnimo dhaba nahay ayaa ay taasi cadeynaysaa, kelmadan Marawaaxid oo marka laba qolo isdishaba aad leedahay marax waaxid ilayn imika waad ka gudubtay oo waxaad noqotay safiire”ayuu yidhi wasiir Cadami.
Sidoo kale taliyaha ciidanka booliska Somaliland sareeye guuto Cabdilaahi Fadal Iimaan, oo isna goobtaasi hadal kooban ka soo jeediyay ayaa yidhi “Wasiir waxaa ugu badan ee kugu soo dhacaa waa halkaas afarbaa lagu dilay, halkaa midbaa lagu dilay.
Markaa xilka aad qabatay Ilaahay heynoo fududeeyo waxaananu kuu balan qaadaynaa sidii aanu wasiir Cali ula shaqeyn jirnay inaanu adigana kuula shaqeyno kuguna garab taagnaano hawlaha qaranka loo qabanayo”.